जेसीजमा काम गर्न जाने हो,यो लाभको पद होइन :- अशोक शंकर - Saptakoshionline
जेसीजमा काम गर्न जाने हो,यो लाभको पद होइन :- अशोक शंकर
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष ०४, २०७६ समय: ९:५०:५०
(राष्ट्रिय अध्यक्षका प्रत्यासी) अशोक शंकर यतिबेला चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ । पूर्वका एक सफल उद्यमीका रुपमा आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएका अशोक शंकर नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्षको उम्मेद्वार भएर मात्र चर्चामा आउनु भएको होइन ।
सबैको साझा उम्मेद्वार बनेर जीत नजिक पुग्नु भएकोले उहाँको चर्चा चुलिएको हो । उहाँ मोरङको पथरीशनिश्चरे १ का स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ । युवा व्यवसायी अशोक शंकरसँग पुस ९ देखि १२ गते सम्म चितवनमा हुने नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अधिवेशन कै पेरिफेरिमा रहेर गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप ।
चुनाव आउन साता दिन मात्र बाँकी छ ?
तयारी कस्तो हुँदैछ ? –मैले झापा देखि कन्चनपुर सम्मका सबै जेसी साथीहरू सँग पुगेर आफ्ना कुरा राखी सकें । खासगरी जेसीजमा काम गर्न जाने हो । यो लाभको पद होइन । सबै साथीहरू विजयको माला पहिरिन मात्र बाँकी छ, भनिरहनु भएको छ ।
लाभको पद नभए पनि अध्यक्ष बन्न ठूलो होडबाजी चल्छ नि ?
धेरैले यही कुरा सोधिरहनु भएको छ । नेपाल जेसीज आफैमा ब्यक्तित्व बिकासका लागि आवश्यक पर्ने एउटा उत्कृष्ठ फोरम हो । देश विदेशमा यसको पहिचान छ । रह्यो कुरा होडबाजीको । म जेसीजमा लागेको १० वर्षभयो । कुनै समय पथरीमा चन्दा सङ्कलन गरेर कार्यक्रम गर्ने अशोक शंकर आज राष्ट्रिय अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्न लागेको छ । त्यसै म यो अवस्थामा आइ पुगेको होइन । मैले १० वर्ष जेसीजका लागि समय दिएको छु । २०१० मा पथरीमा जेसीजको स्थापना गरेपछि २०१४ मा राष्ट्रिय उपाध्यक्ष बनें । २०१८ मा कार्यकारी उपाध्यक्ष भएँ । निरन्तरता दिन नसक्ने साथीहरू छोडिनु भयो होला । तर, म साथीभाइहरूको माया सद्भाव र सहयोगसँगै छु । यो अवधिमा मैले पनि केही लगानी गरेको छु । जेसीजको आफ्नै सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तबाट युवालाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने १० वर्षमा युवालाई आर्थिक उपार्जनमा सहभागि गराउन सकिन्छ । यहाँ आउने वित्तिकै युवा ब्यावसायमा हात हाल्छ । व्यावसायिक बन्छ र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागि हुन्छ ।
जेसीसको सदस्यता लिएको युवा र गैर जेसीज युवामा के फरक देख्नु भएको छ ?
अङ्क गणितीय हिसावले फरक देखिदैन । तर पनि जेसीजमा लागेको युवा एउटा सिद्धान्तमा हिडेको हुन्छ । व्यावसायिक हुन्छ । उसको व्यवस्थापन क्षमता मजवुद हुन्छ । जीवनलाई कता लैजाने भन्ने विषयमा द्विविधा हुन्न । किनकी उसलाई जेसीजले एउटा गाइड लाइन दिइसकेको हुन्छ । तर, गैर जेसीजहरूमा गाइडलाइनको अभाव भएको देखेको छु । शैक्षिक प्रमाण पत्र भएर पनि कुन बाटो हिड्दा कुन गन्तब्यमा पुगिन्छ भन्नेमा द्विविधा हुन्छ, गैर जेसीजमा ।
नव युवालाई दिने कार्यक्रम चाहिँ के के छन् ?
कार्यक्रम भनेको त एप्स जस्तै हो । एप्स संसारमा करोडौं हुन्छन् । मतलव कार्यक्रमका लागि जेसीज नै आवश्यक छैन् । आवश्यक त गन्तब्यको हो । जेसीजको फ्रेमवर्कमा प्रवेश गरेको एउटा १८ वर्षको युवा ४० वर्षको उमेरमा पुग्दा उसले आफूलाई सक्षम सवल र आत्मनिर्भर भएको पाउनु पर्छ । यो काम जेसीजले गर्छ । तालिम त धेरैले लिन्छन । तालिमबाट प्राप्त सीपलाई आर्थिक उपार्जनमा रुपान्तरण गर्न सक्ने बनाउनु जेसीजको कर्तब्य हो । कार्यक्रम यि–यि हुन भन्ने हुँदैन । एउटै फ्रेमको कार्यक्रम हुन्छ । मात्र कार्यान्वयन कसरी गर्ने , युवालाई ५ वर्षमा कस्तो बनाउने र १० वर्ष पछि समाजले उसँग के अपेक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्राथमिकतामा रहन्छ । जेसीजको रणनीति अनुसार तालिम र शैक्षिक मोडलहरू हुन्छन् । ति तालिम र शैक्षिक कार्यक्रममा एउटा युवा ५ दिनको बन्द प्रशिक्षणमा बसेपछि त्यहाँबाट निस्किदा सबै विषयमा जानकार भएर निस्किनु पर्छ ।
जेसीजमा अहिले कस्ता चुनौतिहरू देखिरहेका छन् ?
निर्वाचित भएपछि के के काम गर्नुहुन्छ । प्रतिवद्धता केही छन् ।
मैलेअघि नै भनिसकें । जेसीज राजनीतिक दलको जस्तो घोषणा पत्र लिएर चुनावी मैदानमा आउने संस्था होइन । ।यो एउटा फ्रेमवर्कमा रहेर काम गर्ने संस्था हो । युवाको ब्यक्तित्व बिकास र क्षमतावान युवा निर्माण गर्ने मुख्य उदेश्य हो । तर पनि शान्ति र अहिंसाको पक्षमा काम गर्ने एकसा एक युवा शक्ति तयार गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध छु ।
३६५ दिन भनेको लामो समय हो । दुवईमा ६ महिनामा एउटा सुविधा सम्पन्न सहर बन्छ । हामी कहाँ एउटा पुल निर्माण हुन ५ वर्ष लाग्छ । जेसीस र गैर जेसीजमा फरक नै यही हो । हामी ३६५ दिन नै पर्याप्त मान्छौं । अरुले ५ वर्षमा गर्न सकिन , थप ५ वर्ष समय देउ भनेर भोट माग्छन् । नेपाल जेसीजले वर्षमा १८ वटा कार्यक्रम गर्छ । ५÷६ वटा विदेशमा कार्यक्रम हुन्छन् । शाखा मार्फत त ५÷६ हजार कार्यक्रम हुन्छन् । ईच्छाशक्ति हुँदा काम गर्न ३६५ दिन भनेको पर्याप्त समय हो भन्ने लाग्छ ।
चुनाव जित्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ नि ?
प्यानल पनि तयार गर्नु भएको छ कि ?
राजनीति दलको जस्तो प्यान छैन् । हुँदैन पनि । म त्यस्तो पक्षमा छैन् । ०सर्वसम्मत हुने सम्भावना छ कि, छैन ? छैन् । प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचन हो । स्वच्छ निर्वाचनबाट चुनिएको ब्यक्ति नै नेतृत्वको हकदार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म सधैं अडिग छु ।
याे वर्षकाे क्यान इन्फाेटेक पृथक र बिशेष हुनेछ – अध्यक्ष वास्ताेला
याे वर्ष इटहरीमा प्रदेश स्तरीय क्यान इन्फाेटेक हुदैछ यसकाे तयारी के कस्ताे चल्दैछ ? २ वर्षकाे अन्रालमा फेरी पनि इटहरीमा...
सिड्नीको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने हर्नस्बीस्थित एक नदीमा पौडी खेल्न गएका दुई नेपालीको मृत्यु भएको छ भने एक गम्भीर घाइते भए...
समाजमा सेवक बन्ने भन्दा पनि शासक हुने प्रवृती देखिएको छ
सुन्दरहरैचा, २०४७ सालमा जन्मेका उज्ज्वल थापा हाल सुन्दरहरैचा १० विराटचौकमा बस्दै आएका छन । छोटो समयमा व्यवसायमा विराटचौक...